प्रचण्डले धुम्बाराहीमा नेम्वाङलाई सोधे- प्रधानमन्त्रीको धारणा के छ? | News Nepal
प्रचण्डले धुम्बाराहीमा नेम्वाङलाई सोधे- प्रधानमन्त्रीको धारणा के छ?
काठमाडाै । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा अहिले विवाद उत्कर्षमा छ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लगाएका आरोपको लिखित जवाफ दिन १० दिनको समय मागेपछि नेकपाको औपचारिक बैठक बसेको छैन, तर दुबै पक्षले अनौपचारिक रूपमा भेटघाट र छलफल भने गरिरहेका छन्। यस्ता अनौपचारिक भेटघाट र छलफल यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो खुमलटारस्थित निवासमा गर्ने गरेका थिए। प्रचण्डलाई भेट्न ओली पक्षीय नेताहरू खुमलटारमै पुग्थे।
उनीहरू दुई जनासँग प्रचण्डले धुम्बाराहीमा छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेका हुन्। सुरूमा प्रचण्डले महासचिव पौडेलसँग कुरा गरेका थिए।
छलफलका क्रममा पार्टी विवादको निकासबारे कुरा भएको नेम्वाङले जानकारी दिए।